Taro Factory - Mpanamboatra sy mpamatsy Taro China
Ny talo dia afaka manatsara ny tsimatimanon'olombelona, ​​ho an'ireo marary voan'ny homamiadana amin'ny fotoana fitsaboana sy fiasa fanampiny, noho ny habetsaky ny fluorôida ao anaty taro, ity karazan-tsakafo miaro ny nifin'olombelona ity, ny taro dia afaka manatsara ny tsimatimanota, satria misy akora antsoina hoe proteinina moka. , aorian'ity karazan-pitaovana ity ho entin'ny vatan'olombelona dia azo ovaina ho fananana antsoina hoe immunoglobulin, mba hanatsarana ny tsimatimanon'olombelona, ​​ary io koa dia manazava ny antony mety ahitan'ny taro ny fihenan'ny detoxification. Ho fanampin'izany, ny taro dia mbola manana taovolo sy manja ny volo, ny anjara asan'ny famenoana ny rà sy ny famenoana ny hery fiarovana, ny taro dia misy otrikaina isan-karazany, lovia taro azo hanina matetika, azonao atao ny manatsara ny vatanao, manova tsikelikely ny fanjakan'ny fahasalamana.
Taro be sandry
Ny talo dia azo ampiasaina ho lovia, Zhuan nandrahoina sy nendasina, ary i Shu koa dia azo endasina hahavoky ny hanoanana, ary fanafody tsara io. Ny Taro dia misy otrikaina isan-karazany, misy gliosida manan-karena amin'ny ankapobeny, isaky ny 100 grama misy tsiranoka 17,5 grama, proteinina 2,2 grama, avo kokoa noho ny legioma ankapobeny, ka ny taro dia azo amboarina amin'ny foto-tsakafo.
Tofom-boaloboka, talenta voaendy, lasopy talaky, lovia talenta, mofomamy, mofo mofomamy, misy fomba fahandro am-polony maro amin'ny taro.